Xoghayahii Arrimaha Dibadda Ingiriiska Boris Johnson Oo Is Casilay – somalilandtoday.com
(SLT-London)-Wasiirkii arrimaha dibadda ee Britain, Boris Johnson ayaa ku dhawaaqey in uu xafiiska banaynayo, isaga oo ka mudaaharaadsan qorshaha Theresa May ee ka bixitaanka Midowga Yurub oo noqdey mid jilicsan.
Boris Johnson ayaa noqonaya wasirkii saddexaad ee ku dhawaaqa in uu iscasilo, waxaa horey isu casiley Wasiirkii qorshaha ka bixitaanka Midowga urub ee David Davis iyo weliba ku xigenkiisi Steve Baker.
Boris Johnson ayaa ahaa hoggaamiyihi u ololeeyey ka bixitaanka Midowga Yurub sanadkii 2016 isaga oo ka soo horjeestey raysalwasaarihii iscasiley David Cameron, kadib markii uu ku guuleystey in Britain uu ka saaro Midowga Yurub ayuu isu diyaariyey in uu qabto hoggaanka Xisbiga Conservative, laakin marki uu ogaadey in aanu heli karin cod ku filan ayna ka soo horjeedaa hoggaamiyaasha Xisbigu ayuu ka noqdey damiciisi, Theresa May ayaa u magacaabtey Wasiirka Arrimaha Dibadda, sidoo kale doorashadii Xisbigeedu ku waayey aqlabiyadda Baarlamaanka kadib ayey mar labaad u magacaabtey Wasiirka Arrimaha Dibadda. Boris Johnson ayaa mar ahaa duqa magaalada London.
Iyada oo Xukuumadda Britian aysan ku dhisneyn aqlabiyad ee ay wada dhisteen Xisbiga muxaafidka iyo Democratic Unionist Party, ayaa wajihi karta in loo qaado codka kalsoonida.
Arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyada oo Madaxweynaha Maraykanku u booqashadisi ugu horeysey ku imaanayo UK todobaadkan, taas oo dib loo dhigey sanadkii hore.
Ugu danbeyn 29 Maarso 2019 Britain waxaa laga doonayaa in ay ku dhamaystirto ka bixitaanka Midiowga Yurub markaas oo uu si toos ah u dhaqan gelayo Article 50.